Iimpundu eziSexy Impahla yangaphantsi emnyama yokwenyani SY 159CM Udoli wothando uElaine
Ikomityi yesini onodoli,Oonodoli besini abancinci
Ibali likaElaine elingasemva:
U-Elaine unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-159cm. Ke ulonwabo kunye nolonwabo olufumana kwizinto eziyinyani oonopopi abancinci besini ukwanda. Ukwabelana ngesondo okucocekileyo kunye nokucoceka kuhlala kwamkelekile. Ukuba uzisebenzisa ngesondo, ungalibali ukucoca unodoli wakho wothando emva kokusetyenziswa ngakunye. Oku kuya kunceda ukwakha ubudlelwane obuhlala njalo kwaye ugcine unodoli wakho emhle.
Ukuphakama:159cm Ikomityi yomzimba omtsha
Ukuthumela ubunzima: 39KG
Ububanzi bamagxa: 36cm
Ingalo ubude: 48cm
Ubude besandla: 16cm
Ubude beenyawo: 22cm
Ubungakanani bengalo: 20cm
Ububanzi bethanga: 45cm
Ukujikeleziswa kwethole: 28cm
Umgca wentamo: 29cm
Imilinganiselo yephakheji: 147 * 42 * 34cm
IModeli yeJimena yezihlunu zoMthanda uNodoli oTan Umbala we-167CM weModeli yokuQheleleka ...
Isinxibo sikaMadilynn Isinxibo seTpe Sesondo unodoli omkhulu wamabele 171CM A20 Siz ...
Imbali yemvelaphi kaMadilynn: UMadilynn unodoli wesondo we-TPE ubude be-171cm.Emva komzuzwana, ndahamba phakathi kwemilenze yakhe, ndiyiphakamisa phezu kwamagxa am, ndiqhubela iqhude lam elikhuni kwi-pussy yakhe. Ndikhawuleze ndayityhala kwiibhola zakhe ndaqalisa ukumfeba.Ndamkhama amabele ndaqalisa ukumfeketha ...
USylvia Okwenyani weTorso unodoli weSex Soft 85-90CM TPE
Imbali yemvelaphi kaSylvia: USylvia ngunodoli wezocansi weTPE onobude obuyi-85-90cm.UGeorge washukuma phezu kwamabele akhe kwaye emzuzwini wayewatyhalela kum kwaye wayesele ewafekethile. Ngalo lonke ixesha intloko yelungu lobudoda iphumela ngaphandle kwaye yenza ingxolo enkulu. Ndiye ndaqengqeleka ecaleni kwakhe ndazonwabela...
Imilebe evuthayo ka-Aurelia ngesondo lokwenyani unodoli okrazulwe iiJeans eziBrown ngeNwele eziSilky ...
Imbali yemvelaphi ka-Aurelia : U-Aurelia unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-165cm. Oku ngokwenene kuye kwabangela ukuba abaninzi abenzi boonodoli baqalise iindidi zoonodoli ngexabiso elifanelekileyo kakhulu. Amathoyizi abantu abadala kufuneka akhethwe nangayiphi na injongo-ukhetho olukhethekileyo lweeDoli zothando lwenyani ngokuqinisekileyo ziyanelisa iimfuno zakho zesini ...